Ndị na - emepụta akwa na - echebe - akwa ndị na - emepụta China
Nrụpụta Ihe mgbochi Usoro usoro ule, ọkwa nlele na ịhazi arụmọrụ nke uwe nchebe ka egosipụtara na Isiokwu 1. Lee okpokoro dị n'okpuru ebe a maka akụkụ ndị dị mkpa maka sọpụ iche. Ihe mgbochi mmiri na-ezo aka na uwe nchebe ahụike ga - enwe ike igbochi ntopute nke mmiri, ọbara, mmanya na ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ, na - enwekarị ihe karịrị ogo 4 nke hydrophobicity, iji zere nje virus nke ọbara onye ọrịa, mmiri ahụ na ihe nzuzo ndị ọzọ na - ebute ndị ọrụ ahụike. ...
Ihe a nwere ike ịtụfu
Nkọwapụta uwe nchebe, :dị: Uwe a pụrụ ịtụfu nke Ebe Si malite: FuJian, China Size: XS / S / M / L / XL / 2XL Aha ngwaahịa: Ngwa Ewuwu Ejiri Eji Ejiri Nweta Ahụike, Nwepu Uzo, ikuku na ikuku, ọrụ n'èzí, ọrịa obodo. A na-etinye uwe nchebe kacha mma maka anụ ụlọ, anụ ọkụkọ, ọrụ mgbochi ọrịa na ọrụ n'èzí. Pịnye & Jiri ebe 1) -dị na-enweghị ọgwụ…
Nkọwapụta uwe nchebe Typedị: Uwe a pụrụ ịtụfu Ebe Ihe Mkpuchi: FuJian, China Size: XS / S / M / L / XL / 2XL Aha ngwaahịa: Nchekwa Nweta Ikike Mkpa Ikike: 3000 Piece / pieces kwa ụbọchị Ihe nchedo uwe. A na-eji ihe eji achọ mma akwa. O nwere ọrụ mgbochi-nje, iku ume iku ume, igbochi osmosis, mgbochi mmiri, na enweghị mmetọ. 2. Ihe a na - atụfu maka mkpuchi nchebe ụlọ bụ comf ...
Ikike inye ndị mmadụ ikike: 3000 Ibe / iberibe uwe kwa ụbọchị Ihe ndị eji achọ mma 1. A na-ewepu uwe mkpuchi ụlọ ọgwụ dị elu site na ihe dị elu. O nwere ọrụ mgbochi-nje, iku ume iku ume, igbochi osmosis, mgbochi mmiri, na enweghị mmetọ. A ga-eyi uwe mkpuchi ahụ nke nwere ike ịdọrọ maka ya maka mmiri ya na njiri mara ihe. 3. Okwute rọba na - eme ka ọnụnọ ya dị elu na - egbochi nchebe. 4. Ogologo o ...
Igwe mkpuchi mmiri
Oge ndu: Otutu (iberibe) 1 - 10000> 10000 Est. Oge (ụbọchị) 7 A ga-akparịta ụka maka atụmatụ nchebe O nwere ọrụ mgbochi-nje, iku ume iku ume, igbochi osmosis, mgbochi mmiri, na enweghị mmetọ. A ga-eyi uwe mkpuchi ahụ nke nwere ike ịdọrọ maka ya maka mmiri ya na njiri mara ihe. 3. Okpukpo ahu-n ’ulo ogwu roba warara ma ...
Ihe mkpuchi ọcha
Njirimara uwe nchedo 1. Igwe ube mara mma na -eme arụmọrụ nke nguzogide mmiri 2. Hodot nwere ókè na-agbanwe 3. Ikiri ụkwụ ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe bụ ọnụnọ 4. Mgbatị na nkwonkwo ụkwụ 5. Ihe mkpuchi zuru oke maka ike ọfụma na nkasi obi n'oge eji 6. Ọ dịghị urughuru mwepu 7. Ergonomic-hood 3. Holo na-agbanwe agbanwe maka kachasị mma 9. Ample crotch area Ngwa ejiri mee ihe maka ịta ahịhịa, mpụga uzuzu, ikuku na ikuku, ọrụ ọpụpụ, nsogbu nke obodo…
Ihe eji edozi ura mkpuchi 1. Ejiri uwe imebi ihe eji achọ mma. O nwere ọrụ mgbochi-nje, iku ume iku ume, igbochi osmosis, mgbochi mmiri, na enweghị mmetọ. A ga-eyi uwe mkpuchi ahụ nke nwere ike ịdọrọ maka ya maka mmiri ya na njiri mara ihe. 3. Okwute rọba na - eme ka ọnụnọ ya dị elu na - egbochi nchebe. 4. shellọ ndụ ogologo na mfe ịhapụ ya, na-eme ka ọ bụrụ enyi na gburugburu ebe obibi. & nbs ...
Nkọwapụta uwe nchebe Typedị: Uwe a pụrụ ịdọrọ maka ebe mbido: FuJian, China Size: XS / S / M / L / XL / 2XL Aha ngwaahịa: Nchekwa Nweta Ikike Ikike Ikike Ikike: 3000 Piece / pieces kwa ụbọchị Ngwa ejiri maka mmụba na-efe efe, izugbe. mwepu, uzu na ikuku, oru n’azu, mgbochi oria ime obodo, mgbochi nke ulo akwukwo, wdg. A na-etinye mkpuchi nchebe kachasị mma maka anụ ụlọ, anụ ọkụkọ, ọrụ igbochi ọrịa, na nsogbu n'èzí ...
Etu esi eji akwa mkpuchi n'ụzọ ziri ezi? Ojiji nke uwe nchebe nwere ndụ na ahụike anyị, n'ihi ya, ọ dị mkpa ịhọrọ uwe nchebe na-egbo mkpa chọrọ. Ugbu a, ụdị ndị isi ama ama bụ Dupont nke United States, United States Lakeland, 3M, Sperian, na ndị ọzọ. Mgbe ị nwetasịrị uwe nchebe, ojiji ziri ezi dịkwa mkpa. Ngosiputa ihe eji achọ okike Uwe mkpuchi a ga-abụ nke kpọrọ nkụ, nke dị ọcha ma na-enweghị milge ...
Ekike nke Nchebe
Uwe Nchedo Radiation
Ihe eji edozi ura mkpuchi 1. Ejiri uwe imebi ihe eji achọ mma. O nwere ọrụ mgbochi-nje, iku ume iku ume, igbochi osmosis, mgbochi mmiri, na enweghị mmetọ. A ga-eyi uwe mkpuchi ahụ nke nwere ike ịdọrọ maka ya maka mmiri ya na njiri mara ihe. 3. Okwute rọba na - eme ka ọnụnọ ya dị elu na - egbochi nchebe. 4. shellọ ndụ ogologo na mfe ịhapụ ya, na-eme ka ọ bụrụ enyi na gburugburu ebe obibi. Ngwa ...
Uwe Egwu Kemịkalị